UNKSZ Amanda Mbuyazi (37) noNKsz Neli Mkhwanazi (35) okutholwe izidumbu zabo zidindilizile emgwaqeni, KwaMbonambi. Isithombe: SITHUNYELWE
KUSOLWA ingxabano yezithandani ngokudutshulwa kufe abangani bephuma ephathini ngempelasonto eShobeni, KwaMbonambi.
Izidumbu zikaNksz Amanda Mbuyazi (37) waseKhondweni Reserve noNksz Neli Mkhwanazi (35) waseMtubatuba zitholwe zidindilizile, zinamanxeba okudutshulwa eziphongweni emgwaqweni waseMzingazi ophumela eRichards Bay ngoMgqibelo ebusuku. Kuthiwa izidumbu zabo zitholwe ngamalungu omphakathi waKwaMbonambi. Umshayeli okuvela ukuthi wayehamba nabo, kuthiwa amaphoyisa alandela umkhondo wemoto ayehamba ngayo amthola emtholampilo egwaziwe engalweni kwesobunxele.
Okhulumela amaphoyisa, uColonel Thembeka Mbele usiqinisekisile isigameko nokuvulwa kwamacala athe ayaphenywa.
“Kuboshwe umsolwa oneminyaka engu-39 ngamacala amabili okubulala. Kulindeleke ukuthi avele eNkantolo yeMantshi KwaMbonambi uma esephume esibhedlela,” kubeka uColonel Mbele.
Kubikwa ukuthi ingxabano eyaholela ekubulaweni kwabo isuswe wumsindo wokungena kocingo okuthiwa beluvela kowesifazane efonela isoka likamufi (* -Amanda). Kuthiwa ngesikhathi kusuka umsindo, isoka lagadla entombini kwalamula abantu ababekhona emcimbini. Impi yezithandani kuthiwa ayiphelanga lapho njengoba kuhoshwe ukuthi isoka labamba igqubu ngesikhathi kuxatshanwa ephathini. Kuthiwa sekuhanjwa umsolwa wamisa imoto esigangeni watshela intombi yakhe ukuthi mayiphume emotweni. Kuthiwa baphuma emotweni kwaphetha ngokuthi badutshulwe eziphongweni, emgwaqweni okutholakale kuwo izidumbu zabo.
Umshayeli okuvela ukuthi wayehamba nabo, kuthiwa amaphoyisa alandela umkhondo wemoto yakhe amthola emtholampilo egwazwe engalweni yakwesobunxele.
Owesifazane oyilungu lomndeni kaNksz Mbuyazi nongathandanga ukuthi kudalulwe igama lakhe uthe ngokuzwa kwakhe kwasuka umsindo ephathini ngenxa yocingo olwangena, isoka labe seligadla lishaya udadewabo owayebuza ukuthi ufonelwa ngubani.
“Kwasiza ukulamula kwabantu ababekhona ngesikhathi eshaywa udadewethu emcimbini ngokuzwa kwethu. Okusiphatha kabi wukuthi kwenzeka konke lokhu nje lo mfana ( isoka) ubehamba nodadewabo owayeshayela imoto ababehamba ngayo,” kuchaza owesifazane.
Elandisa uthe umndeni usola ukuthi isoka labamba igqubu ngesikhathi kuxatshanwa ephathini njengoba ehoshe ukuthi impi yaqhubeka sebegoduka kwagcina ngokuthi uNksz Mbuyazi noNksz Mkhwanazi behliswe emotweni badutshulwa eziphongweni.
Eqhuba uthe okubuhlungu kakhulu wukuthi udadewabo ushiye indodana eneminyaka engu-18 isiyintandane njengoba noyise wayo esashona.
“Isoka lika-Amanda besingalijwayele futhi bebengenaso isikhathi eside bethandana. Okungicasulayo wukuthi kuvela ukuthi like laboshwa eminyakeni edlule,” kusho owesifazane othe akanalo ulwazi lokuthi laliboshelwe icala lani isoka.
Uthintwa umndeni wakaNksz Mkhwanazi, uthe awunakho okutheni ongakusho ngoba nawo udaba oluphelele mayelana nesigameko uluzwe ngomndeni kaNksz Mbuyazi.
“Akukho okusha esingakusho ngoba konke okwenzekile sikuzwe ngomndeni ka-Amanda owazi udaba oluphelele,” kubeka uNksz Nonhlanhla Biyela ongudadewabo omdala kamufi.